कार सेल्सम्यानका छोरा बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपति जित्नुका ३ कारण
१. कोभिड, कोभिड, कोभिड
कोरोनाभाइरस महामारी अहिले विश्वका लागि निकै ठूलो सन्त्रास र त्रासको विषय बनेको छ । र, सम्भवतः यही कारणले नै बाइडेनले निर्वाचन जितेका हुन् ।
अमेरिकामा कोरोना महामारीको प्रभाव विश्वमै सबैभन्दा बढी परेको छ । त्यहाँ २ लाख ३० हजारभन्दा धेरैले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खासमा त्यति उदार नीति लिएनन्, यसलाई उनले कहिले चिनियाँ भाइरस बताए त कहिले यसका कारण केही नहुने बताए ।
एकातिर ट्रम्प यसो भनिरहेका थिए भने अर्कोतिर बाइडेनले यसलाई गम्भीर रुपमा परिभाषित गरिरहेका थिए । यही महामारीका कारण ट्रम्पको क्याम्पेन कमजोर भयो, उनले लिएको समृद्धि र विकासको नारालाई ओझेलमा पार्यो ।
बाइडेन खासमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि उनी बारम्बार राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अगाडि बढेकाथिए । सन् १९८७ मा होस् या सन् २००७ मा उनका अभियान र ह्वाइट हाउस छिर्ने उनको चाहनाबारे अमेरिकीले सायदै बिर्सिएका थिए ।
यसपटक उनलाई त्यो अवसर मिल्यो ।
र, यसका लागि प्रमुख कारक भए उनका प्रतिस्पर्धी डोनाल्ड ट्रम्प । यसमा पनि कोरोनाभाइरस महामारीले ठूलो खेल खेलेको हुनुपर्छ । जब बाइडेन मास्क लगाएर, सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्वाचन अभियानमा होमिएका थिए, त्यति बेला ट्रम्पले भन्ने शब्दहरु थिए– बाइडेन लुकिरहेका छन् ।
तर, आफ्नो अभियानलाई महामारीको ख्याल गरेर अगाडि बढाएका बाइडेनले अन्ततः जित निकाले ।
३. ट्रम्प नै प्रतिस्पर्धी भएकाले
३ नोभेम्बरमा अमेरिकामा निर्वाचन हुँदै थियो । त्यसको केही दिनअघि देखि ट्रम्पको प्रचारप्रसार अमेरिकामा बढ्न थाल्यो । अनि टेलिभिजनमा ट्रम्पको अभियानको क्याम्पेनबारे नयाँ नयाँ विज्ञापन आइरहेका थिए ।
तर, यति बेलासम्म ट्रम्पले अमेरिकी जनताको ठूलो विश्वास गुमाइसकेका थिए । उनले विश्वास गुमाउनको कारण थियो– अमेरिकामा पछिल्लो वर्ष यता भएका विभिन्न आन्दोलन र हिंसाका घटनाहरु ।
यहीबीच ट्रम्पले गरेको क्याम्पेनलाई पनि बाइडेनले गलत प्रमाणित गर्न धेरै समस्या परेन । उनले गरेको एउटै प्रभावकारी प्रचार थियो– म ट्रम्प होइन । यही एउटा कारणले पनि उनले छिटो अमेरिकी मनहरुमा आफूलाई स्थापित गराए र अगाडि बढ्न सके ।
प्रकाशित मिति : कात्तिक २३, २०७७ आइतबार ११:२६:५१, अन्तिम अपडेट : कात्तिक २३, २०७७ आइतबार ११:२७:४२